तल्लो खारेको ८६ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर खुल्यो, अपरसोलुको ३३ लाख आउँदै « GDP Nepal
( Tuesday, September 29, 2020)
तल्लो खारेको ८६ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर खुल्यो, अपरसोलुको ३३ लाख आउँदै
Published On :9February, 2019 1:32 pm
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको खारे कोरिडोरमा निर्माणाधीन ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारे खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक युनिभर्सल पावरले सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरेको छ ।
कम्पनीले ८६ लाख ७४ हजार ४ सय ९२ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको छ । शुक्रबारदेखि बिक्री खुला भएको यो सेयरका लागि माघ २९ गतेसम्म आवेदन गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युतको प्रवद्र्धक अपरसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले ३३ करोड ७ लाख ५० हजार बराबरको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ ।
अपरसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले ३३ करोड ७ लाख ५० हजार बराबरको ३३ लाख ७ हजार ५ सय कित्ताब बराबरको सेयर जारी गर्न लागेको हो ।
निष्कासन हुने सेयरमा १३ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित स्थानीय र १९ लाख ५७ हजार ५ सय कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीले आगामी जेठमा आयोजना प्रभावित तथा एक बर्षपछिको फागुनसम्ममा सर्वसाधारणका लागि सेयर निकाष्शन गरिसक्ने जनाएको छ ।
तल्लो खारे गौरीशंकर गाउँपालिकामा छ र यसको निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । युनिभर्सल पावर कम्पनी तत्कालीन क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले स्थापना गरेको सीएचडीसी कम्पनीको नेतृत्वमा सञ्चालित छ ।
तल्लो खारेको लागत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । ०७६ साउनदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणको काममा एक दिन पनि अवरुद्ध नभएको कम्पनीले जानएको छ । आयोजनामा बैंक अफ काठमाडौंको नेतृत्वमा सानिमा बैंक, माछापुच्छ«्रे बैंक, कुमारी बैंक, जनता बैंक, लक्ष्मी बैंक र कैलाश विकास बैंकले लगानी गरेका छन् ।
हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा निष्कासन भएका पछिल्ला आधादर्जन सार्वजनिक निष्कासन भएका कम्पनीको मागलाई हेर्दा यो कम्पनी सेयरमा १ सय कित्ताभन्दा माथि नै लगानी गर्नु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि वार्षिक ३३ करोडको विद्युत् बिक्री हुनेछ । यस कम्पनीको नेतृत्व गरेको कम्पनी सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले यसपूर्व ३ वटा जलविद्युत् आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण गरिसकेको छ ।
जसमा लमजुङमा १ सय ८३ किलोवाटको स्याङ्गे जलविद्युत् आयोजना, ४.४ मेगावाटको राधीजल विद्युत् आयोजना र बुटवल पावर कम्पनीसँग मिलेर ४ मेगावाटको खुदी छन् ।
गोपनियताको सपथ नलिएका खतिवडाको राज्यका सूचनामाथि पहुँच ‘गैरकानुनी’ !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त डा. युवराज खतिवडाको सक्रियता बाक्लिएको छ ।
वासिङ्टन (एजेन्सी): अमेरिकी संघीय एक न्यायाधीशले आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लोकप्रिय भिडियो सेयरङि एप्स
महासंघ उपाध्यक्ष ढकाललाई कोरोना पोजेटिभ, सम्पर्कमा आएकालाई सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा आसन्न साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाललाई
दसैं-तिहारमा काठमाडौंसहित सात जिल्लामा फेरि लकडाउनको सम्भावना बलियो !
काठमाडौं । लकडाउन र निषेधाज्ञाले वाक्क भएका नेपालीले फेरि यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने देखिएको
महिला सशक्तीकरणका लागि ग्लोबल आइएमईको ‘मेरी उनीलाई’ मुद्दति खाता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त र स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यले ‘मेरी उनीलाई’